Tsika Dhizaina mabhodhoro, Vodka Mabhodhoro, Whisky Mabhodhoro - Chengfeng
Tsika Dhizaini Bhodhoro
Diki Hodha Hombodo
Yedu yegiraziware inopa kune yakachena uye yakachena kurarama!
Mhepo yekufambisa ngarava, kubatana uye kufambira mberi, kururama uye kubatsirana pamwechete, kutora mutoro!
Kuti uve indasitiri mutyairi wepakati-yakakwira magumo magirazi ekugadzirisa, kuita mutsauko mukugadzirisa kwemunhu, uye kuita kuti zvigadzirwa zvedu zvive zvakakosha!
Isu tinotarisa pane dhizaini uye kugadzira chero mhando girazi doro mabhodhoro neyako yakadzama zvinodiwa. Kugadziridza hukuru hwemabhodhoro emadhora kubva kumabhodhoro madiki ewaini 50ml kusvika ku1.5L, uye nesarudzo pakati pekopu, sikuru yepamusoro, uye macorks, zvinoreva kuti unogona kugadzirisa rakasiyana girazi doro bhodhoro rechako chako nediki diki reodha.
750ml Double-Wall Doro Doro Bhodhoro
Kushongedza kupfura, kurongedza, sirika yekudhinda yekudhinda, etching, sandblasting, achiita zvekutemera, kupenda kwemavara, girazi frosting, pate-surpate, rondedzero yegoridhe uye glaze kupopera.
300ml Waini Girazi
Iyo isina Stemless Aerating Waini Girazi inounza mashandiro kune akakosha maitiro muwaini girazi dhizaini. Yakanyatsogadzirwa nemaoko, ichi chinyorwa chepamutemo chinopa nzira yakasarudzika uye yakasarudzika yekunwisa waini yako kana mweya. Dururirai zvakananga musero yeaeration yakamisikidzwa mukati mekati regirazi. Waini ichapfuura nepakati, zvichikonzera 7oz yewaini ine mweya iyo yakagadzirira kufadza pallet yako. Shandisa bhata rechando muaerator kuti utonhore waini chena, whisky, kana cognac sezvavanenge vachiwedzera. Dishwasher yakachengeteka.
Guangzhou ChengFeng Brothers Industrial Company Limited inyanzvi yebhizimisi inoshandiswa mukugadzira, kugadzira nekutsvakurudza kwepakati-yakakwirira magirazi. Yedu zvigadzirwa mhando dzinosanganisira waini chikamu chekusimudzira chipo magirazi, waini chikamu girazi mabhodhoro, girazi remvura mabhodhoro, girazi chikafu chirongo, uye zvimwe zvakafanana magirazi zvigadzirwa.
Kambani yedu iri muGuangzhou China, ine traffic iri nyore uye nekukurumidza zvinhu, unogona kusarudza pakati pechitima, mhepo, mudziyo wegungwa uye kutakura kwenyika. Nzvimbo yedu iri padyo neHuangpu neNorts ports, zvinhu zvinogona kuendeswa kunzvimbo dzese pasirese nemidziyo. Isu tinovavarira kugadzira epasirese epasi zvigadzirwa emhando yepakati-yakakwira magirazi zvigadzirwa nehunyanzvi timu, manejimendi ane simba uye indasitiri yekupayona michina.
Ndokumbira utore kutaurirana kuti utore!
Kwete 1, Jiuji Street, Caotang Village, Nancun Town, Panyu, Guangzhou, Guangdong, China
Mavara girazi bhodhoro